Mugabe wins again in Zimbabwe - Times Union
Mugabe wins again in Zimbabwe
Published 10:49 pm, Saturday, August 3, 2013
HARARE, Zimbabwe — President Robert Mugabe, who has led Zimbabwe since it threw off white rule in 1980, won another term Saturday as the official results were announced for last week's disputed election, defeating his main challenger with 61 percent of the vote and roaring back to secure his grip on power after having to share it for the past five years.
The results were announced by the Zimbabwe Election Commission on Saturday, moments after the challenger, Morgan Tsvangirai, denounced the voting, saying it had been rigged.
"This fraudulent and stolen election has plunged Zimbabwe into a constitutional, political and economic crisis," Tsvangirai, who won 33 percent of the vote, said in a news conference at his house. He demanded that a new election be held so that Zimbabweans could "freely and fairly elect a government of their choice" - a step that a spokesman for Mugabe's party, ZANU-PF, quickly rejected.
U.S. Secretary of State John Kerry also cast doubt on the validity of the election in a statement Saturday.
"In light of substantial electoral irregularities reported by domestic and regional observers, the United States does not believe that the results announced today represent a credible expression of the will of the Zimbabwean people," Kerry said.